कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा नै छैन र कुन जिल्लामा खुकुलो छ? कता च्याप्प बन्दा त छैन नि? | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा नै छैन र कुन जिल्लामा खुकुलो छ? कता च्याप्प...
कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा नै छैन र कुन जिल्लामा खुकुलो छ? कता च्याप्प बन्दा त छैन नि?
कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ । गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा निषेधाज्ञा छैन । अन्य १० जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर लम्ब्याइएको छ ।
कास्कीमा सोमबारबाट असार १५ सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । निषेधाज्ञा अवधिमा सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न पाउने छैनन् । निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ ।
दैनिक उपभोग्य सामान बिक्रीवितरण गर्ने खाद्यान्न पसल बिहान ५ बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म खोल्न पाइने छ । पसल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य २ मिटरको भौतिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ ।
स्याङ्जामा पनि सोमबारदेखि असार १५ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा थपिएको छ । निजी सवारीसाधन जोरबिजोरका आधारमा चल्न पाउनेछन् । सार्वजनिक सवारीसाधनले जिल्लाको सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने गर्न पाउने छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने छन् ।
लमजुङमा असार २ देखि थप भएको निषेधाज्ञा असार १० सम्म जारी छ । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म चल्न दिइएको छ । म्याग्दीमा आइतबार थपिएको निषेधाज्ञा असार १४ सम्म जारी रहनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञालाई परिमार्जन गर्दै सरकारी कार्यालयमा आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । निजी सवारी जोरबिजोरका आधारमा चल्ने बताइएको छ । तनहुँमा भने संक्रमण कम नभएको र गाउँगाउँमा कोरोना फैलिएको भन्दै असार १६ सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ ।
बागलुङमा सोमबार राति १२ बजेदेखि असार १५ सम्म परिमार्जनसहित निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ । सार्वजनिक सवारी जोरबिजोर प्रणालीमा चल्नेछन् । वित्तीय संस्था बिहान ९ देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म र अत्यावश्यकबाहेकका पसल बिहान ७ देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म खुल्न पाउनेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले असार ११ सम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ । जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको सोमबार रातिदेखि असार ११ गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकले जिल्लाभर कोभिड संक्रमणको दर घट्दै गए पनि जोखिम भने रहेको जानकारी दिँदै नागरिकलाई सचेतना अपनाउन अनुरोध गरेको छ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका, घरपझोङ गाउँपालिका र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा असार १५ सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ।
Previous articleसामान्य क्यान्सरको लक्षण यस्तो हुन्छन, जान्नुहोस आगाडी नै फेरि गरो पर्नसक्छ
Next articleअब सरकारले निषेधाज्ञाका लागि दिएको छुट बन्द गर्ने, किन फेरि बन्दा गर्ने